Waa maxay Sababta Keenta Qoyaanka Farjiga Dumarka? - iftineducation.com
iftineducation.com – Qoyaanka farjiga haweenka ay leedahay ayaa ah dhibaato aad u weyn oo dumar badani ay ka cawdeen ama ka sheegteen taasi oo ku beerta wel wel oo ku aadan badnaashaha qoyaankaas , waxaana arintaan ka sheegta 65% dumarka.
-Qoyaan dheecaaneedkaas ayaa midab ahaan cad , waa uu jiid-jiidmayaa waxa uuna dhab aana u shabahaa dheecaanka ukunta oo kale.
-Inta badan xubinta taranka haweenka waa ay qoyan tahay maadama uu leeyahay maadada loo yaqaan Lactic acid oo ah maado caaneed taasi oo ka soo shubanta halboow layaasha dhiigga taasi oo quudisa darbiga xubinta haweenka.
-Dheecanaada iska dabiicga ah midib ahaan waa cad yihiin waana jileec , mana laha wax shiir ah sidoo kale ma keento cun-cun ah.
Waxyaabaha keena dheecanada badan ee xubinta taranka? Adeegsiga kareemooyinka xubinta taranka loogu tala galay , saabuunada oo xasaasiyad ku reebi kara xubinta haweenka , xerashada dhar hoosaadka cariiriga ah (nikis kugu dhagan) iyo xanuunka sokorowga. Sidoo kale infekshan ku dhaca dhuunta minka , cudarada taranka ku dhaca iyana waa keenaan.
-Darbiga xubinta taranka waxad ku karemeysa burcadka caanaha , marka xaajada soo gudato(Suuliga) si wacan u nadiifi.
Sawir Qosol Badan oo Laga Sameeyay Cabdiwali Gaas & Siyaasadiisa is Diidan ee Puntlad iyo Qaranka